Iingozi zemihlambi nezizwe | Martech Zone
Iingozi zemihlambi nezizwe
NgoMgqibelo, Disemba 31, 2011 NgoMvulo, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
Kukho iincwadi ezimbalwa endizifundileyo ezinefuthe kwindlela endiziva ngayo malunga ne-Intanethi kunye nentengiso iyonke. Enye yeencwadi yayinjalo Iimpawu zikaMark Earl Umhlambi: Ungayitshintsha njani indlela yokuziphatha kweMisa ngokubopha indalo yethu yokwenyani enye ibingokaThixo Iintlanga: Sifuna ukuba usikhokele.
Uninzi lwentetho yemihlambi nezizwe intle kakhulu… iinkokheli zaxoxa (njenge Ividiyo yeTED kaThixoZombini ziyamangalisa kwaye ziyakhuthaza. Ndingumntu okholelwa kakhulu kwimihlambi nakwizizwe, kodwa ndikwanethemba lokuziphatha kakubi ngabantu xa kufikwa kwimihlambi nakwizizwe. Ezo ncwadi kunye nevidiyo zonke ziyathetha xa iinkokheli zikwazi ukuwuphathela umhlambi kakuhle… kodwa zingawuhoyi umnyama umhlambi.
Ezopolitiko zihlala ziyinto ethintela wonke umntu kwintengiso kunye neetekhnoloji zeeblogi, kodwa ndingatsho ukuba ukuthengisa okuqaqambileyo kunye nokusebenzisa itekhnoloji yonke into ukwenza ngesakhono somgqatswa ukuba aphumelele okanye aphulukane nolonyulo. Ndiyakholelwa ukuba ukuthengisa kunye netekhnoloji yeyona nto iphumelele Unyulo luka-2008 kwaye wabeka uMongameli u-Obama kwi-White House.
Buyela emhlambini. Zimbini iingxaki eziphambili zomhlambi:
Iinkokeli eziphosakeleyo - Ngamanye amaxesha oyena mntu unesisa, okrelekrele, oyena mntu mhle okanye omde egumbini akalunganga, kodwa sihlala sibalandela.
Abalandeli abathobelayo Ukuthobela ngamanye amaxesha kuphenjelelwa luloyiko kodwa kukwakhuthazwa kukungazi.
Yintoni ephefumle iposti yebhlog yimeko yangoku yezopolitiko yelizwe. Thatha umzekelo, uMongameli Obama. Esinye sezibhengezo zesandi esizivayo ngoku kwaye enye iya kuthi iqhubeke nokukhawulezisa ukuya kunyulo nguMongameli Obama AmaMelika ayonqena. Isicatshulwa sichazwa gwenxa kodwa siphindaphindwe kuwo onke amaphiko ezopolitiko orhwebo, ingxoxo okanye ingxoxo. Nangona isetyenziswe ngaphandle komxholo, iinkokeli ekunene zisebenzisa isicatshulwa kunye nomhlambi wazo uyaqhubeka nokuqhubela phambili umbono wokuba u-Obama ukholelwa ngokwenyani ukuba abemi bethu bayonqena. Ayisiyonto ayithethileyo leyo.
Ngaphambi kokuba uqale ukucinga ukuba ndiza kukhetha ngasekunene, ndiza kongeza ukuba ezopolitiko ezivela ekhohlo zinobuzaza. Ngenxa yokuba uMongameli u-Obama bambalwa, uninzi ngasekunene babhalwe njengabacalucaluli ngokungavumelani tu nezopolitiko zakhe. Esi sisityholo esinzima sokuzikhusela kuba oko kuthetha ukuba ngekhe ungavumelani noMongameli-ngayo nantoni na. Oku kubi kwaye kuyaqhubeka ukutyhalwa ngabantu abathile abasekhohlo. Kuyimfuneko ukuba iyekwe kuba ayivelisi kwaye iyakhwaza ubuhlanga abenzi nto ukunceda ilizwe. Kodwa yindlela efanelekileyo yokwahlula umhlambi!
Abantu baseRiphabhlikhi bayaqhubeka nokucela umngeni kwirhafu eyongezelelweyo kunye neziko leenkqubo ezintsha kunye nenkcitho kweli lizwe kuba umbono wabo kukuba asinakukwazi ukuwufikelela. Uqhushululu eGrisi nakwamanye amazwe aphesheya athe aqaliswa ngenxa yokunqunyulwa kwenkqubo yamalungelo karhulumente kufuneka ixhalabise wonke umntu. Kodwa impikiswano evela ngasekhohlo ihlala ibuya "uyakhathala ngabantu okanye awukhathali?" Ukuba ufuna ukusika iinkqubo, awukhathali ngabantu. Kodwa xa siphelelwa yimali, ngubani oncedayo? Ngokwendalo, incoko emva koko iya ekufumaneni ingeniso engaphezulu (aka: isabelo esifanelekileyo). Imihlambi iyahlukana.
Ndizama ngenene ukugcina iinkolelo zam zingekho eposini, kwaye ndithethe nje ngendlela amaqela ethu ezopolitiko awusebenzisa ngayo kwaye awusebenzise umhlambi. Okubi kunokuxoka - okanye ngokucacileyo ukuba akulunganga - yindlela umhlambi ohlasela ngayo abo bangaphandle kwayo. Ndiqinisekisa ukuba ndiza kufumana amagqabantshintshi ambalwa malunga nale post kwelinye icala okanye kwelinye. Xa umhlambi uhlasela, kubuhlungu kakhulu kwaye amandla amakhulu okanye uloyiko lohlaselo lunokuhambisa umhlambi kwicala elingelilo. Uninzi lwabantu luphepha umhlambi ngokungathethi kwanto kwaphela. Andiqondi ukuba licebo elilungileyo elo. Singakhomba phantse kubo bonke ubundlobongela kwimbali- nangona yayiyimfazwe okanye ishishini, kwaye iyehla iye phantsi kwinkokheli ethembekileyo eyayingalunganga kunye nomhlambi owawulandela ngokungaboniyo ngenxa yoloyiko okanye ukungazi. Imihlambi ikhokelele kwiiMfazwe zeHlabathi kunye nokudodobala kwezoqoqosho.
Ukuba ufuna ngokwenene ukubona omnye umzekelo wezopolitiko wale veki zidlulileyo, kuya kufuneka ujonge uRon Paul kunye nonyango lwakhe ngamajelo eendaba kunye nephiko lasekunene. Ukuba uPaul uyaphumelela e-Iowa, ndivile kwizikhululo zeendaba ezinkulu ukuba "kubeka ubunyani bekhokhasi ye-Iowa". Ndicinga ukuba oko kuthetha ukuba i-Iowa ayiseyonxalenye yomhlambi esiyibiza ngokuba yi "United States".
Wow… ngenene? Ke ukuba uninzi lweenkokheli zopolitiko azivumelani nesininzi sabavoti, ingxaki ayingombono wabo… kukuba abantu bazizidenge kakhulu ukuba benze isigqibo esifanelekileyo? URon Paul uyaqhubeka nokubhalwa ngokungafanelekanga kumanqanaba amaninzi… nangona kukho ubungqina obuninzi bokuxhasa izimvo zakhe kunye nerekhodi lokuvota. Kodwa umhlambi awumthandi uRon Paul. Ungaphandle kwaye iinkokheli zomhlambi zenza konke okusemandleni ukumngcwaba ngokukhawuleza.
Omnye umzekelo kolu nyulo yayiluphononongo endalubona apho kuphela I-6% yabavoti abalondolozayo bathi uDonald Trump uza kuba nefuthe kuvoto lwabo. Ndibukele izikhululo zeendaba ezimbini ezahlukeneyo kwaye bobabini bamgxotha uTrump ngokusekwe kwiziphumo zovoto. Kodwa ukuba uyema kwaye ucinge ngayo, i-6% yimpembelelo enkulu. Abongameli abaninzi baphumelele kwaye balahleka ngaphantsi kwalonto! Nangona kunjalo, umhlambi awufuni ukuba uTrump afake izinto phezulu… ke ukugqwetha ipholi yayiyeyona ndlela ilula kakhulu.
Xa ndithetha nepolitiki nabantu (aka umhlambi), ndihlala ndisiva, "Usisithethi esihle kangaka!" okanye "Ungumngxuma!" njengokuba ndixoxa ngoMongameli wangoku kunye nabagqatswa beRiphabliki. Ngokukhawuleza ukuva kwam amazwi anje, ndiye ndindindisholo kuba oko kubonisa ukungabi nakuqonda ngqo kowona mbambano… ingaba ilizwe lethu liya kuba ngcono okanye hayi phantsi kobunkokheli balo mntu. Ndingakhathalela ukungasebenzi kakuhle kwesithethi kwaye mhlawumbi ndinethemba lokuba nomngxunya olandelayo. Ngamanye amaxesha imingxunya ** yenza umsebenzi omninzi owenziweyo.
Umzekelo wokugqibela: Abazali bam basandula ukubandwendwela kwaye bathetha ngezabo Ukhuseleko lasekuhlaleni. Basebenza nzima ubomi babo bonke - ngamanye amaxesha bobabini abazali bam basebenze imisebenzi eliqela. Utata wam naye uthathe umhlala-phantsi kwiiNavy Reserves. Bobabini bathathe umhlala-phantsi kwaye baqokelela ukhuseleko lwentlalo. Ndabakhumbuza ukuba kutheni sinezokhuseleko kwezentlalo nendlela le nkqubo ibisebenza ngayo ngelo xesha… kunye nomndilili wokulindelwa kobomi kwaye ngubani ofuna le nkqubo Abazali bam bobabini bayadla ngendeb 'endala kwaye babenyanisekile… beziva ngathi bafakiwe kule nkqubo kwaye bebenjalo banelungelo ukufumana intlawulo yabo. Eyona nto intle kakhulu isishwankathela indlela umhlambi oziva ngayo kunye nokuba umhlambi usabela njani kuyo nayiphi na intetho yokunciphisa ukhuseleko lwasentlalweni- nokuba ngaba kunyanzelekile na ukuba kuqinisekiswe ubumbano lwenkqubo.
Ungathanda ukucinga ukuba iinkokeli eziphosakeleyo ziya kutyhilwa kwaye ubulumko bomhlambi buya koyisa. Ngokuqinisekileyo andinalo naluphi na ukholo oluza kwenzeka. Umabonakude oyinyani ulawula iindlela zomoya, abantu abaninzi bavotela i-American Idol kunonyulo, kwaye umhlambi uyaqhubeka nokuvotela umdla wabo wexesha elifutshane kunokuba kulungele umhlambi. Kumsebenzi wam wokuthengisa, ndisebenzele iinkampani ezi-crappy ezaziphumelelayo kunye neenkampani ezintle ezazisokola.
Ngelishwa (okanye nethamsanqa kwabanye) ukuba iinyani zihlala zingahambi kwindlela yombono. Kwaye xa olo luvo luqhubela phambili emhlambini, lunamandla ngakumbi. Ukuhlawulela loo mandla yinxalenye yomsebenzi wam njengomthengisi. Sihlala sicinga malunga nokuziphatha komhlambi ngoku kwaye sisebenzise izicwangciso ezixhasa ubunjani bomhlambi kuqikelelo lweenzuzo zabaxumi bethu ndicinga ukuba oko kundenza inxenye yengxaki.
tags: Unyulo lwe-2011ukhethoumhlambiobamaron paulIsizwe